မျက်မှောက် အမေရိကန်သတင်းလောကမှာ အသုံးများနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
President Donald Trump, accompanied by Vice President Mike Pence, right, speaks duringasigning ceremony for executive orders regarding trade in the Oval Office at the White House, March 31, 2017, in Washington.
အမေရိကန်သတင်းလောကမှာ အသုံးများနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
ဒီတပတ် English American Style Idioms ကဏ္ဍမှာ မျက်မှောက်အမေရိကန်သတင်းလောကမှာ အသုံးများနေတဲ့ အီဒီယံအသုံးတချို့ ဖြစ်တဲ့ Do or die, Make or break နဲ့ Smooth sailing အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Do or die
Do (တခုခုကို ပြုလုပ်တာ)၊ or (သို့မဟုတ်)၊ die (သေတာ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က တခုခုကို လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင် အသက်သေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ၁၈၇၅ ခုနှစ်နဲ့ ၁၈၈၀ ခုနှစ်များကြား Scotland က ကဗျာဆရာ Robert Burns က March To Bannockburn ဆိုတဲ့ Scotland ရဲ့  လွတ်လပ်ရေးအတွက် ပထမဦးဆုံး ဆင်နွှဲတဲ့စစ်အကြောင်း ရေးသားတဲ့ သူ့ရဲ့ကဗျာမှာ ပထမဦးဆုံး သုံးနှုန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်ကိုတန်းဖိုးကြီးလှတဲ့ လွတ်လပ်ရေးရဖို့အတွက် အသက်စွန့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အရေးကြီးလို့ သွေးစည်းရမယ့်အချိန်ဆိုက်ပြီဆိုတာကိုလည်း ရည်ညွှန်းရာရောက်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့  အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်က အရှုံးနဲ့ မရင်ဆိုင်ရအောင် တခုခုကို စွန့်စားပြီး လုပ်ရမှာကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တခုခုကို အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ သိပ်ကိုအရေးကြီးပြီး မအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့ ပေးဆပ်ရမှု ကြီးမားမှာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ မြန်မာမှာ သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီးဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ အနီးစပ်ဆုံးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးကို Obamacare လို့ လူသိများတဲ့ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကို အစားထိုးမယ်လို့ သမ္မတ Donald Trump က သူရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားစဉ်က ကတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်း အစားထိုးမဲ့ဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုနိုင်ရေးဟာ Trump အစိုးရအတွက် သိပ်ကိုအရေးကြီးပြီး အရှုံးမခံနိုင်တာကြောင့် Do or die ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး သတင်းမီဒီယာတွေမှာသုံးနှုန်းခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မဲ့နေ့မှာ ကန့်ကွက်သူတွေထဲမှာ ဒီမိုကရက်တစ်အမတ်တွေအပြင် ရီပတ်ဘလင်ကန်အမတ်တွေလဲ ပါနေတဲ့အတွက် မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရင် ဘယ်လိုမှ နိုင်ခြေမရှိတဲ့အတွက် အဆုံးမှာ Trump က အောက်လွှတ်တော် မှာမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲ ဥပဒေကြမ်းကို ပြန်ရုပ်သိမ်းတဲ့ အခြေဆိုက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးရဲ့ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
This isado or die game for our football team. If we lose, we will be out of the competition.
ဒီပွဲဟာ ကျနော့်တို့ ဘောလုံးအသင်းအတွက် သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီးပွဲပါပဲ။ ကျနော်တို့ ရှုံးရင်တော့ ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ရမှာဖြစ်တယ်။
(၂) Make or break
Make (တခုခုကို ပြုလုပ်တာ)၊ or (သို့မဟုတ်)၊ break (ကျိုးတာ၊ ပျက်စေတာ၊ ဆုံးရှုံးစေတာ) ဖြစ်ပြီး၊ စကားစုတခုလုံးရဲ့  လုံးကောက်အဓိပ္ပါယ်ကတခုခုကိုဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သလို၊ ပျက်အောင်လည်းလုပ်နိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်ကလည်း ရှင်းပါတယ်။ တခုခုနဲ့ ပတ်သက်လို့ အောင်မြင်မှု ဒါမှမဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုကို အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတဦးရဲ့ ဘဝမှာ တခုခုကြောင့် အောင်မြင်ရင်လဲ အောင်မြင်နိုင်သလို၊ မအောင်မြင်နိုင်ရင်လဲ ဘဝပျက်မယ့် အခြေအနေမျိုးကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဘဝမှာ အကဲစမ်းမှုတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရာမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို စမ်းသပ်ရာလည်း ရောက်ပါတယ်။ ဒဏ်ခံနိုင်ရင်ခံ၊ မခံနိုင်ရင်တော့ အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ့် အခြေအနေကို ရည်ညွှန်းပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို စောစောက အီဒီယံမှာ ရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်း Obamacare ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဥပဒေကို အစားထိုးဖို့ ရီပတ်ဘလင်ကန်တို့ဘက်က ဥပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တော်မှာ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ တင်သွင်းရာမှာ အမတ်အများစုဖြစ်တဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက မဲအလုံအလောက်ရနိုင်ဖို့ စည်းရုံးခဲ့ပေမယ့်လဲ ဒါကို မနှစ်သက်တဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန် အမတ်တွေလည်း ရှိနေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကန့်ကွက်ဖို့ရှိတဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်အမတ်တွေရဲ့  မဲ ဒါမှမဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်က ဒီဥပဒေကြမ်းရဲ့  ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ နေရာမှာရှိနေတဲ့အတွက် ၊ သူတို့ရဲ့ ထောက်ခံမဲကိုရရင် နိုင်မယ်။ မရရင်တော့ ရှုံးနိုင်တာမို့ Make or break အနေအထားမှာရှိမယ်လို့ သတင်းမီဒီယာတွေက ထောက်ပြခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မတ်လ (၂၄) ရက်နေ့က ဒီဥပဒေကြမ်းကို မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ စီစဉ်ရာမှာ မဲအလုံအလောက် မရရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကို သမ္မတ Trump က သဘောပေါက်ခဲ့လို့၊ ဥပဒေကြမ်းကို အောက်လွှတ်တော်ကနေ ပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်တဲ့အဆင့် ရောက်ခဲ့တာပါ။ တနည်းတော့ ဒီဥပဒေကြမ်းကို ကန့်ကွက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ရီပတ်ဘလင်ကန်အမတ်တွေရဲ့  မဲဟာ ဒီဥပဒေကြမ်းရဲ့  ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ် ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
Joe’s father believes the army will either make or break his son.
Joe ရဲ့  အဖေက သူ့သား စစ်ထဲဝင်ရင် ဒဏ်ခံနိုင်ရင် ထူးချွန်မယ်၊ မခံနိုင်ရင် ဒုက္ခရောက်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။
(၃) Smooth sailing
Smooth (ချောမွေ့ တာ)၊ sailing (လှေဆိုရင် ရွတ်လွှင့်တာ၊ သင်္ဘောဆိုရင် ခရီးထွက်တာ) ဖြစ်ပြီး စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ချောချောမွေ့မွေ့ ရွက်လွှင့်သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံး ဆင်းသက်လာတာက ပင်လယ်ခရီးသွားရာမှာ ရှေးတုံးက လေရဲ့ အားကို အသုံးပြုပြီး ရွှက်လွှင့်သွားရာမှာ ရာသီဥတု ကောင်းရင် လှိုင်းထန်တဲ့ လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ မကြုံရဘဲ၊ ခရီးတလျှောက် ချောချောမောမော၊ အေးအေးဆေးဆေး ဖြစ်တာကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက်အဓိပ္ပါယ်က အားလုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့ တာ၊ အေးအေးဆေးဆေးရှိတာ၊ အခက်အခဲ ပြဿနာ မကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးကို သမ္မတ Trump အမည်တင်သွင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး Neil Gorsuch အနေနဲ့ အထက်လွှတ်တော်ကော်မတီကြားနာစစ်ဆေးပွဲမှာ သိပ်အခက်အခဲ မရှိဘဲ၊ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ အတည်ပြုခံရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆကြတဲ့ တချို့ ရီပတ်ဘလင်ကန်အမတ်တွေက Smooth sailing idiom ကို ရည်ညွှန်းသုံးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
When I started my new job, I had some difficulties. Now everything is smooth sailing.
ကျနော် အလုပ်သစ် စဝင်တုန်းက အခက်အခဲအချို့  ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ အားလုံးအဆင်ပြေနေပါပြီ။
ဒီသတင်းပတ်တင်ပြခဲ့တဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေက Do or die, Make or break နဲ့ Smooth sailing တို့ ဖြစ်ပါတယ်။